News Archives - What's On In Harare
Harare News 23 August 2021
On Zimbabwe’s underground market, the Zimbabwean dollar is collapsing against the United States dollar as confidence in the local currency plummets. As a last option, traders in Zimbabwe are fixing outdated US dollar notes for desperate clients. The South African nation will not be receiving any additional US dollar money in the near future. Consequently, […]
The post Zimbabwe in Crisis – What Happens in the Country? appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …